Abaninzi baba ngamalungu eSizwi SeSiseko ngenxa yokuba bathanda iincwadi zePercival, impembelelo enkulu ababenayo ebomini babo kunye nomnqweno wokusixhasa ekufumaneni ubufundi obanzi. Ngokungafani neminye imibutho, asinayo i-guru, uthisha okanye igunya elilawulayo. Injongo yethu nokuzibophezela kukuzisa abantu behlabathi uPiccival's masterpiece, UkuCinga nokuPhelela, kunye nezinye iincwadi. Sifumaneka ukunikezela ngesikhokelo, xa siceliwe, kodwa nathi sinokuxhasa ubulumko bobuqu-zikarhulumente-ukufunda ukuzithemba nokuzibandakanya igunya lomntu ngaphakathi. Iincwadi zePracival zingakhonza njengesikhokelo sokuncedisa kule nkqubo.
I-Word Foundation isekela ukufundiswa kweencwadi zikaPercival. Ngomagazini wethu wekota, ILizwi, sidale isikhala ukwazisa abafundi bethu ngeendlela ezahlukeneyo zokufunda. Xa umntu eba ilungu leLizwi leSiseko, le ngcaciso iyafumaneka kumagazini wethu: